Iinkonzo zeDynamics - Anshun AKF Medical Technology Co, Ltd.
Iindlela zoNyango lwezoNyango
● UDuan Yufei 一 usekela weNkongolo yaBantu kaZwelonke kunye nomlawuli wephondo lezeMpilo neleMpilo.
Uthe iPhondo lase-Guang dong lirhoxise ngokupheleleyo ukongezwa kwekhomishini yoNyango lwezoNyango ekupheleni konyaka ophelileyo, siza komeleza ukubek'esweni kunye nokuvavanywa kokongezwa kwekhomishini kulo nyaka, ukukhuthaza ukusekwa kwenkqubo yohlengahlengiso olunamandla kwixabiso lezonyango
● Ingxoxo malunga nokucinywa kwebhonasi yezixhobo ezisetyenziswayo zonyango kunye nokukhuthaza ngakumbi ukufikelela kuluntu
Ngokokuthunyelwa okumanyeneyo kwekomiti yeQela lePhondo laseGuangdong kunye norhulumente wephondo kunye neemfuno zesicwangciso sokusebenza sokwandisa uguquko olubanzi lwezibhedlele zikarhulumente kwiPhondo laseGuangdong ... ....
● Ukuthetha ngokubambisana phakathi kweGuangdong, eHong Kong.neMacao- ukomeleza impilo engxamisekileyo yezempilo
IGuangdong, iHong Kong neMacao ngokudibeneyo babambe inkomfa yesibini yentsebenziswano kwezempilo eGreater Bay Area eShenzhen ngoFebruwari 25 kulo nyaka. La maqela mathathu atyikitye isivumelwano sokusebenzisana kwezempilo eGreater Bay Area, neququzelela ukutyikitywa kweeprojekthi zentsebenziswano ezingama-62 kwaye yabonelela ngeqonga eliphezulu lentsebenziswano kwintsebenziswano kwezonyango nezempilo eGuangdong, Hong Kong naseMacao.
● Inyathelo elilandelayo yindlela yokomeleza intsebenziswano kwezonyango nakwezempilo phakathi kweGuang dong, Hong Kong neMacao.
UDuan Yufei wazisa ukuba okokuqala, siya komeleza uyilo lwenqanaba eliphezulu, senze imeko efanelekileyo yomgaqo-nkqubo, sikhuthaze intsebenziswano esondeleyo yezixhobo zonyango ezikumgangatho ophezulu, kwaye sikhuthaze ukusasazwa okusebenzayo nangokufanelekileyo kwezinto zezonyango kwimimandla emithathu, kufuneka wenze ipatheni entsha yonxibelelwano phakathi kweGuangdong, Hong Kong neMacao ...
● Ukuthetha ngombutho wezempilo patri Ngethemba lokukhuthaza umthetho walo msebenzi.
Kwiiseshoni zalo nyaka ze-NPC kunye ne-CPPCC, uDuan Yufei uphakamise umthetho wokukhawulezisa umsebenzi wezempilo wokuthanda ilizwe. umkhondo wokuba semthethweni kwinqanaba likazwelonke ......